Indawo Encane Ethule, Enempilo - I-Airbnb
Indawo Encane Ethule, Enempilo
Ikamelo e-i-villa ibungazwe ngu-Warren
U-Warren Ungumbungazi ovelele
Njengengxenye yenjongo yethu yokukhuthaza impilo nokuphila kahle, sinikeza amagumbi amabili angasese, anethezekile kubantu abafuna indawo enokuthula yokuhlala eGranada. Amagumbi ahlanganisa ukufinyelela ejimini, wonke amakilasi ejimu nawe-yoga, nezaphulelo zokudla nezinsiza ze-spa.
Uma ubungaklama indawo ekahle yokuhlakulela eyakho impilo nokuphila kahle, ibingabukeka kanjani? Igumbi elithule, elinethezekile? Ijimu enabaqeqeshi bomuntu siqu abesekayo? Isitudiyo se-Yoga? Ukudla okunempilo? Amamasaji? Indawo esekelayo, enobungane? Yilokhu ozokuthola uma uhlala nathi e-PURE.
Amakamelo ethu angu-2 kanye nefulethi eli-1 zidalelwe abantu abafuna indawo enempilo, ekhululekile yokuhlala e-Granada. Nokho, sidinga kuzo zonke izihambeli zethu ubuncane obuncane bobusuku obubili nokuzibophezela ukusiza ukugcina indawo enokuthula, enempilo.
I-PURE itholakala ngemuva nje kweSan Francisco Convent, amabhulokhi amathathu ukusuka kumgwaqo omkhulu wokuphila kwasebusuku, kanye namabhulokhi angu-3.5 ukusuka epaki elimaphakathi. Ngokuyisisekelo, eduze kwayo yonke into kodwa hhayi ukuvala ukuphithizela kweGranada. I-PURE iseduze nesiqongo segquma elincane, ngakho sishaywa umoya echibini. Imvamisa, I-PURE ipholile amadigri ambalwa kunezinye izingxenye zedolobha njengomphumela.
Uma ufuna indawo ongayibiza ngekhaya eGranada, iPURE iyindlela enhle kakhulu. Ngaphezu kokuba indawo ephephile, enempilo futhi ekhululekile ongahlala kuyo, uzozithola usuhlala phakathi kwabangane ngokushesha. Izivakashi zethu kanye nothisha abasivakashelayo be-Yoga bahlala bephawula ngohlobo nokwamukela kwamalungu eqembu lethu.
Uma ufuna indawo ongayibiza ngekhaya eGranada, iPURE iyindlela enhle kakhulu. Ngaphezu kokuba indawo ephephile, enempilo futhi ekhululekile ongahlala kuyo, uzozithola usuhlala phak…